Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Mu'assasada Al-Kataaib oo soo saartay filim cusub oo heer sare ah kana waramaya dagaalladii ugu dambeeyay Muqdisho. Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab Sh.Mukhtaar Abu-Zubayr Allaah Dhowree oo ka hadley Somaliland.	Jamaacada Ictisaam iyo Jalaafaynta Jihaadka.(Tariikhda Madaw ee Ictisaam). Sheikh Cumar Faaruuq Shalay Iyo Maantay Iyo C/laahi Yusuf Iyo Sheikh Sharif (Dhagayso)	Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa fariin soo diray oo kaga hadlaayo qaraxyadii barakaysnaa ee ka dhacay magaalada kampala ee dalka uganda.(DHAGAYSO)	Sh.Usama”Cadaalada ka mid ma’ahan in Ameerikaanku ku Noolaadaan Baraare iyada oo ay Walaalaheena Gaza ku jiraan Nolol Rafaad badan”.	Xarakatu shabaabul mujaahidiin oo faahfaahisay camaliyadii Istish-haadiga ee Lagu Halaagay Saliibiyiinta AMISOM (DAAWO SAWIRADA)	Ciidamo ka tirsan dowladda kmg ah oo ku le’day qaraxyo Xalay ka dhacay degmada waabari.
Posted on July 24, 2010 by halganka	Inkabadan Todobo Askari oo ka tirsan xukuumada ridada ah ayaa ku la’day qaraxyo xalay ka dhacay degmada waabari ee gobolka banaadir oo kamid ah degmooyinka fara ku tiriska ah ee gacanta ay ku hayso dowlada ridada ah.
Filed under: Uncategorized « Howl-galo looga saarayo Suuqyada waxyaala dhacay oo ka socda Wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka. Khasaaraha ka dhashay Tiro Madaafiic ah oo Xaly lagu garaacay qaar ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir oo sii kordhaya. »